Ampidino Tor Browser ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (69.80 MB)
Ampidino Tor Browser,
Inona no atao hoe Tor Browser?
Tor Browser dia mpizaha Internet azo antoka namboarina ho anireo mpampiasa solosaina izay miahy ny filaminany an-tserasera sy ny fiainany manokana, hijerena an-tsokosoko Internet aminny fomba tsy fantatra anarana ary hamakivaky aminny fanesorana ireo vato misakana rehetra eto aminny tontolonny internet.
Ilay rindrambaiko, izay miasa ho ampinga mahery aminny fiarovana ny fifamoivoizana sy ny statistikanny fifanakalozana data, izay azo zahana na arahi-maso aminny loharanom-baovao samihafa, dia manafina ny mombamomba anao aminny Internet sy ny angon-drakitra momba ny tantara an-tserasera ankoatra ny fanafenana ny toerana misy anao miaraka aminny fanampiana ny endri-javatra isan-karazany sy ny fitaovana.
Tor Browser, izay miorina aminny fototry ny tambajotra napetraka avy aminny mpizara virtoaly, dia ahafahanao mizaha Internet aminny fomba tsy fantatra anarana ary miditra aminny tranokala tadiavinao nefa tsy voarara na voasakana. Ilay browser, izay mifanakalo data miaraka aminireo mpizara isan-karazany eranizao tontolo izao ambaninny lalàna sy algorithme samihafa, dia saika tsy azo atao ny manara-maso satria mahazo ny fifamoivoizana rehetra avy aminny loharano samihafa.
Fomba fampiasana Tor Browser
Mampiasa ny kinova Firefox namboarina, Tor dia manana mpampiasa tsotra sy mora ampiasaina antsoina hoe Vidalia. Aminizany fomba izany, ny rindrambaiko, izay azo ampiasaina mora foana aminireo mpampiasa aminny ambaratonga rehetra, dia ho fantatry ny mpampiasa efa nampiasa Firefox taloha kokoa.
Raha te hanomboka hampiasa ny browser anao aorianny fizotra mora sy tsy misy olana dia tsy maintsy ataonao aloha ny fikirakirana tambajotra eo an-toerana na mifandray aminny tambajotra Tor aminny alàlanny fanovana mandeha ho azy. Azonao atao ny manao ireo asa ireo aminny tsindry vitsivitsy eo aminny interface izay hiseho aorianny fametrahana azy, ary afaka manomboka mampiasa Tor Browser ianao, izay hisokatra ho azy aorianny fifandraisanao aminny tamba-jotra Tor.
Ampidino ny Tor Browser
Rehefa ampiarahinay miaraka ireo endri-javatra rehetra noresahinay ireo dia Tor Browser dia iray aminireo mpikirakira tranonkala mahomby sy azo antoka izay azonao ampiasaina hivezivezy aminny Internet malalaka sy hiditra aminireo tranonkala voasakana.
Serivisy fanaraha-maso manakana: Tor Browser dia mampiasa fifandraisana hafa isaky ny tranokala vangianao. Noho izany, ny serivisy fanarahan-dia sy dokam-barotra ataonny antoko fahatelo dia tsy afaka manangona vaovao momba anao aminny fampifandraisana ireo tranonkala miditra. Hodiovina ho azy ny cookies sy ny tantaranao rehefa vita ny fitetezana Internet.
Arovy aminny fanarahan-dia: Tor Browser dia manakana ny olona mety manara-maso anao tsy hahita izay tranonkala vangianao. Hitanizy ireo fotsiny fa mampiasa Tor ianao.
Tohero ny fanondro-tànana: Tor Browser dia mikendry ny hampiavaka ny mpampiasa rehetra aminny alàlanny fisorohana ny dian-tànanao dizitaly tsy halaina, izay afaka mamantatra anao mifototra aminny mombamomba sy ny mombamomba ny fitaovana.
Famaritana maro sosona: Rehefa ampitaina aminny tambajotran Tor ny fifamoivoizanao dia ampitaina aminny fijanonana telo samy hafa izy io ary atao encrypty isaky ny mandeha. Ny tambajotra Tor dia misy mpizara an-tsitrapo an-tsitrapo anarivony fantatra aminny anarana hoe Tor relay.
Safidio malalaka ny Internet: Miaraka aminny Tor Browser, azonao atao ny miditra malalaka aminireo tranonkala mety hosakananny tamba-jotra mifandray aminao.
Sintomy ny Tor Browser hiaina fizahana maimaimpoana ahafahanao miaro ny fiainanao manokana tsy misy fanarahana maso, fanaraha-maso na fanakanana.
Haben'ny rakitra: 69.80 MB